Tim Cook: Apple Watch ၏ရောင်းအားသည်အရှိန်မြှင့်နေသည် ငါက Mac ပါ
အက်ပဲလ်ရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Tim Cook ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ် 2015 ၏ WSJDliveကာလီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ Laguna သဲသောင်ပြင်ရှိ Wall Street ဂျာနယ်နှင့်တိုက်ရိုက်ကွန်ဖရင့်ရှိသည့်နေရာတွင်၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်ချေရှိကြောင်းအတည်ပြုနိုင်သည် လာမယ့်တနင်္လာနေ့အသစ်က Apple TV4ဝယ်ပါနှင့် Apple Music သည်လက်ရှိတွင်ရှိသည်ဟုထပ်မံဖော်ပြခဲ့သည် ပေးဆောင်ဖောက်သည် 6,5 သန်း.
Tim Cook က Apple Watch ၏ရောင်းအားကိုညွှန်ပြနေစဉ်တွင်သူသည် Apple Watch အတွက် Health app နှင့်သက်ဆိုင်သောအင်္ဂါရပ်အသစ်များကိုမဆွေးနွေးလိုပါ။ ပြိုင်ဘက်တွေကိုသတင်းအချက်အလက်မပေးချင်ဘူး.
Apple Watch ၏ကျန်းမာရေးရှုထောင့်သည်ရှေ့တွင်ရှည်လျားသောထုတ်ကုန်လမ်းပြမြေပုံရှိကြောင်း Cook ကပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့အပြင်သူသည်လူအများစုသည်ထုတ်ကုန်၏ကျန်းမာရေးနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၏ရှုထောင့်များကိုတန်ဖိုးထားလေးစားကြပုံရသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
စီအီးအိုမှပြောကြားချက်အရအက်ပဲလ်သည်၎င်းနာရီ၏ရောင်းအားကိုသတင်းပို့ခြင်းမရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည် ယှဉ်ပြိုင်အကြောင်းရင်းများ။ "ကျနော်တို့ကအရောင်းနံပါတ်များကိုကြေညာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအချက်အလက်ကအပြိုင်အဆိုင်များတယ်။
ကွတ်ခ်က Apple Watch ၏ရောင်းအားသည်Watchပြီလမှ စတင်၍ အက်ပဲလ်နာရီကိုစတင်မိတ်ဆက်စဉ်ကအရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ခဲ့သည်ဟုအရိပ်အမြွက်ပြောကြားခဲ့သည် အသစ်သောဆိုင်များတွင်မှ attribute။ ကိရိယာသည်အဘယ်ကြောင့်မလိုအပ်သည်ကိုမေးမြန်းသောအခါ၊ ကွတ်ကသင်စမ်းကြည့်သင့်ကြောင်းနှင့်နာရီကိုသုံးစွဲသူများစိတ်ကျေနပ်မှုရှိကြောင်းထပ်မံပြောကြားခဲ့သည်။ 'စီးရီးထဲက'.
ဖြစ်နိုင်ချေရှိမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများကအဖြေပေးခဲ့သည် iPhone နဲ့ချည်ထားလို့မရတဲ့နာရီတစ်လုံးသူကဟာသပြောတာက "ငါမပြောချင်ဘူး" တဲ့။ ကွတ်သည်များအတွက်ကြိုတင်ရောင်းအားကြောင်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည် Apple TV အသစ် စတင်ပါလိမ့်မယ် လာမယ့်တနင်္လာနေ့, အောက်တိုဘာ 26။ သူကအက်ပဲလ်ဂီတကိုလက်ခံယုံကြည်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောခဲ့တယ် ပေးဆောင်သုံးစွဲသူ ၆.၅ သန်း.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ » Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ » Tim Cook: Apple Watch ရောင်းအားတက်နေပြီ
Watch2 update သည်ကျွန်ုပ်၏လက်ပတ်နာရီကိုပျက်စီးစေသည်။ ယခု၎င်းသည်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကိုမကြာခဏလက်ခံနေပြီးတခါတရံသူတို့ကအခြားအချိန်များသို့ရောက်လာသည်။ သူတို့မလုပ်နိုင်ပါ၊ အသိပေးချက်များနှင့်ထပ်တူဖြစ်သည် ပိုဆိုးသည်မှာ Apple ကအရာရာတိုင်းကိုမစွမ်းဆောင်နိုင်သေးပါ။ သို့သော်သူတို့မှာကတိက ၀ တ်မရှိသေးပါ။ iPhone မှတဆင့်သော့ဖွင့်ခြင်း၊ အလုပ်မလုပ်ခြင်း၊ Siri ကိုဘာကြောင့်ဘာကြောင့်ပြုလုပ်တာလဲ အရင်ကဲ့သို့အလုပ်မလုပ်ပါ
နောက်ဆုံးအကြိမ်တွေ့ရှိခဲ့သည့်ပျက်ကွက်မှုကြောင့် iOS9နှင့်အတူ update ကိုမဖွင့်ရခြင်းအကြောင်းအရင်း ... အကယ်၍များ iOS9ကိုမွမ်းမံသောအခါ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အလုပ်မလုပ်တော့ပါ၊ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများကိုကြည့်ပါ။ အချို့သောအချိန်များတွင်သူတို့သည်အားနည်းချက်များကိုတွေ့လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းနောက်ကျလွန်းပါကကျွန်ုပ်သည် Apple ထုတ်ကုန်များအပေါ်ယုံကြည်မှုမရှိတော့ပါ။
ငါကသူတို့ကိုအဖွဲ့အနည်းငယ်အတွက်ဆော့ဖ်ဝဲဒီဇိုင်းရေးဆွဲတာ၊ beta နောက်မှာ beta ကိုလွှတ်လိုက်တာနဲ့နောက်ဆုံးမှာ hardware အမျိုးမျိုးနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲ။ သူတို့ကိုရှက်ကြောက်ပါ!
လက်ပတ်နာရီတွင်လက်ပတ်နာရီကိုတင်းတင်းတင်းတင်းဆုပ်ကိုင်သလား။ ငါပြောခဲ့တဲ့ပြproblemsနာအားလုံးကငါအဲဒီလိုဖြစ်ခဲ့တာ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာအရေပြားနဲ့မနီးမဝေးဖြစ်တာ၊ အချို့အချိန်တွေမှာသူကလက်ကောက်ဝတ်ကနေဝေးသွားပြီးလက်ပတ်နာရီက၎င်းကိုလက်ကောက်ဝတ်ကနေဖယ်ထုတ်ပြီးဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကိုနားလည်ခဲ့တယ်။ သော့ခတ်
ဟုတ်ပါတယ်၊ ငါအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည့်ပထမ ဦး ဆုံးသောနေ့ကဲ့သို့လက်ကောက်ဝတ်နှင့်ကိုက်ညီသည်။
O'Food ကိုရပ်ပါ၊ Mac App Store တွင်အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာအခမဲ့ပါ